तुलसीलाई छतमाथि राख्ने गर्नुभएको छ ? यो दिशामा फर्काउनुहोस् चम्किन्छ भाग्य:: Naya Nepal
हरेक दिन पुजा गर्नुहुनछ ? ध्यान दिनुहोस्, यी ५ चिज बिना अपूर्ण हुन्छ हरेक पुजा !
पाँचौं भाग चिनी क्यान्डी हो, जुन पूर्ण अमृत बनाउनको लागि यी सबैसँग मिसाइन्छ। कहिँ पनि उखुको रस शुद्ध र शुद्धको कारणले प्रयोग हुन्छ।स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पञ्चमृत अर्थात्‌ यी सबै चीजहरूको बनाइएको मिश्रणलाई प्रसादको रूपमा खानेले सबै प्रकारका रोगहरू पनि हटाउँछ। वास्तवमा पञ्चमृत स्वयं प्रचारको प्रतीक हो। यो पाँच सामग्री एक तरीकाले वा अरू तरिकामा प्रचार-प्रसारको सन्देश दिन्छ।